Kubhekwe ukuthi unciphe umthwalo wentengo kaphethroli. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Osomnotho bathi loku kufanele kwehlise intengo kapethroli ngoMeyi.
Lesi simemezelo senziwe wuNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ePhalamende ngesonto elidlule. UGodongwana uthe le ntela izokwehla kuze kube wumhla ka-31 Meyi kulo nyaka.
UGodongwana wayeshilo ngesikhathi ethula iSabelomali sango-2022/23 ukuthi bayabonisana noNgqongqoshe wezokuMbiwa Phansi uMnu uGwede Mantashe ngokumba eqolo kukaphethroli ukubheka ukuthi yini abangayenza ukuzama ukuwehlisa.
Njengamanje ilitha kaphethroli libiza ngaphezudlwana kukaR21. Esitatimendeni, uGodongwana uthe ukukhuphuka kukaphethroli ngenxa yokuvulwa komnotho womhlaba emva kokuthanjiswa kwemithetho yeCOVID-19 nempi ephakathi kweRussia ne-Ukraine sekufake ingcindezi enkulu entwengweni kaphethroli nasemananini eminye imikhiqizo.
“Loku kwengeza ezimemezelweni esasizenze eSabelweni sango-2022 lapho kungabanga bikho khona ushintsho kwi-general fuel levy ne-Road Accident Fund levy (intela okuhlinzekwa ngayo isikhwama esibhekelela abalimala nabashona ezingozini zomgwaqo) nokuphungule umthwalo wentela ngoR3.5 billion,” kusho uGodongwana.
Lolu shintsho luzonciphisa i-general fuel levy kaphethroli isuke R3.85c ilitha, iye kuR2.35c kanti ekadizili izosuka kuR3.70c ilitha, iye kuR2.20 ezinyangeni ezimbili.
Kulinganiselwa ukuthi loku kuzosho ukuthi uhulumeni ulahlekelwa wuR6 billion wentela ngalezi zinyanga ezimbili.
Nokho-ke uMantashe uphakamise ukuthi le mali ibuyiswe ngokuthi kudayiswe omunye uwoyela ongahluziwe owugadingozi ogcinwa yiStrategic Fuel Fund eyingxenye yeCentral Energy Fund.
Okunye okuyingxenye yemizamo yiziphakamiso ziikaMantashe zokuthi:
intengo kaphethroli (i-basic fuel price) yehliswe ngo-3c ilitha kusukela ngoJuni 1;
Ukuqedwa kwentela ka-10c ilitha kuphethroli obizwa nge-95 unleaded odayiswa ezindaweni ezimaphakathi neNingizimu Afrika;
Kuklanywe imali intengo kaphethroli ebizwa ngo-93 octane engezukweqa kuyo;
Kuyekwe ukushicilelwa kwemigomo okufanele ilandelwe ukunquma intengo kadizili ukwandisa ukuncintisana;
Kubuyekezwe yonke indlela okubalwa ngayo intengo okudayiselwana ngayo, ukugcinwa kukaphethroli nokusatshalaliswa kwawo ukuze kubonakale ukuthi ngeke ibe khona yini indlela yokuwunciphisa.
Usomnotho waseFNB uMnu uSiphamandla Zondi uthe lokhu kuncishiswa (kwe-general fuel levy) ngoR1.50 kuzokwenza umehluko emandleni emali.
“Sisabona ukuthi amanani kaphethroli azonyuka cishe ngo-30c ngo-Ephreli (nokuwumphumela waloku kungenelela) ufinyelele kuR21.90c ilitha. Emva kwaloko esikubhekile ngamanani kawoyela, intengo kaphethroli izothi ukudamba. Besilindele ukuthi amandla emali eqe ku-6% ngo-Ephreli noMeyi kodwa manje asezohambisana nokusuke kunqunyiwe
UMnu uZondi, usomnotho waseFNB
“Lilonke, loku kuzomsiza umthengi kusho nokuthi iyehla ingcindezi yokunyusa imalimboleko; nokufanele kusize ukukhula komnotho,” kusho yena.
UZondi wengeze ngokuthi enye indlela lolu sizo olungakhokhelwa ngayo wukusebenzisa imali ethe xaxa etholakale ngenxa yamanani aphezulu okumbiwa phansi. “Nokusho ukuthi uma ingcindezi ngentengo kawoyela iqhubeka isikhathi eside kunesilindelekile, umNyango wezeziMali usazokwazi ukwenza ukuthi kungazweli kakhulu. Kungenzeka futhi (ngenxa yaloku kungenelela) yehle intengo kaphethroli ngoMeyi inqobo nje uma amanani kawoyela emhlabeni namandla erandi ezoloku eme lapho ekhona njengamanje” kusho uZondi.
IPhalamende lizobuyekeza imithetho ethintekeyo ukwenza lolu shintsho.